AppLock - Apps & Privacy Guard APK ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » AppLock - Apps & Privacy Guard ကိုပိတ်ပါ
AppLock - Apps & Privacy Guard APK ကိုပိတ်ပါ
အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးသော့ခတ်ခြင်း၊ သီးသန့်လုံခြုံရေးအစောင့်၊ Photo Vault
စကားဝှက်သော့ခတ်ခြင်းနှင့်ပုံစံသော့ခတ်ခြင်းကဲ့သို့သောသော့ခလောက်များကိုပေးပါ။ WhatsApp၊ Instagram၊ Facebook၊ SMS၊ အဆက်အသွယ်များ၊ Messenger၊ ဆက်တင်များ၊ ပြခန်း၊ Gmail၊ Applock ဖြင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုတားမြစ်ပါ။
AppLock, သင့်ရဲ့ privacy secure ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံရေး app တစ်ခု - လုံခြုံရေး Lock ကိုအတူ Now ကိုသော့ခတ် apps များ!
သင်၏လူမှုရေးအက်ပ်များ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုကိုပိတ်ထားပါ။ အခြားသူများကသင်၏စာ၊ အီးမေးလ်နှင့်အဆက်အသွယ်များကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။
● AppLock နှင့်သင်၏လူမှုရေး app များကိုသော့ခတ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုကာကွယ်ပါ။ မျက်စိ prying မှသင်၏လူမှုရေးဒေတာလုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်လော့။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကစုစုပေါင်းလုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါ။
# Photo Vault
AppLock သည်ပြခန်းမှဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုပြင်ပသိုလှောင်မှုခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖတ် / ရေးခြင်းဖြင့်ဓာတ်ပုံ / ဗွီဒီယိုသိုလှောင်ရုံသို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ သင်၏သော့ခတ်ထားသောဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအက်ပ်သော့ခတ်ခြင်းဖြင့်အခြားသူများမြင်ခြင်းအတွက်သင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ကင်မရာခွင့်ပြုချက်ဖြင့် App Locker သည်သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများအားမှားယွင်းသောစကားဝှက်ဖြင့်သုံးကြိမ်ခိုးယူရန်ကြိုးစားသူများ၏လျှို့ဝှက်စွာဓာတ်ပုံရိုက်သည်။ အဘယ်သူသည်စပ်စုသူတွေကိုရှာဖွေပါ! ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှုအတွက် Applock သည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူများ၏ဓာတ်ပုံကိုသင်၏မက်ဆေ့ခ်ျသို့ချက်ချင်းပေးပို့လိမ့်မည်။
အထက် Android6.0 သို့မဟုတ်လက်ဗွေသော့ဖွင့ထောက်ခံပါတယ်။
● Lock ကို app ကိုဈေးကွက်
app ကို Locker နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းအတွက် App ကိုစျေးကွက်သော့ခတ်ခြင်းဖြင့်ဂိမ်းများကိုဝယ်ယူရာမှသင်တို့၏သားသမီးထားပါ။ လုံခြုံရေး Lock ကိုသင့်ရဲ့ AppLock ဖြစ်ပါတယ်။
● Lock ကို apps များ
လုံခြုံရေး Lock ကို - AppLock app များကိုသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးနှင့် privacy ကိုစောင့်ရှောက်။ လုံခြုံရေးသေချာစေရန်!
● Lock ကိုဖုန်းက Settings
setting များကိုသော့ခတ်ခြင်းဖြင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဆက်တင် (Wi-Fi, 3G ဒေတာ, ဘလူးတုသ်, Sync ကို, USB နဲ့ဒါ) ပြောင်းလဲနေတဲ့ထံမှအခြားသူများကိုတားဆီး။ သင့်ရဲ့စမတ် AppLock ဖြစ်!
ပုံစံမဲနှိုက်လမ်းကြောင်းကို Hide နှင့်မမြင်ရတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျခြုံငုံ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါ။
●စံနမူနာ Lock ကို & Password ကို Lock ကို
pattern သော့ခတ် & password ကိုသော့ခတ် themes များအများအပြားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ pattern သော့ခတ်သော့ဖွင့်ဖို့ပိုမြန်သည်။ နှင့်ပုံစံသော့ခတ်၏ mode မှာ, သင်လမ်းကြောင်းကိုဆွဲဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ app များကိုသော့ခတ်ရန်အဘို့အတာပိုလုံခြုံ။
မည်သည့်သော့ဖွင့် mode ကို Switch! ကောင်းပြီဒီဇိုင်း Theme ကိုသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်!
App သော့ခတ်ခြင်းသည်မလိုလားအပ်သောအသိပေးချက်များကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ မည်သည့်အရေးကြီးသောအရာကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်
သော့ချထားသော apps များနှင့် unlocked app များကိုသတ်မှတ်ထားရုံတစ်ခုမှာနှိပ်ပါ။
● Lightweight ပေမယ့်အစွမ်းထက်
လုံခြုံရေး Lock ကို - AppLock သေးငယ်အာကာသကိုအသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့ privacy အားလုံးကိုကာကွယ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။
လုံခြုံရေး Lock ကို - AppLock တစ်စမတ် privacy ကိုအစောင့်, သင့်ဖုန်းကိုခြုံငုံလုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည်။
AppLock - Apps & Privacy Guard ကိုပိတ်ပါ
9.51 ကို MB
AppLock - Privacy Guard ကို